Uma sikholwa idatha dermatologists ucwaningo, le nkinga kuhambisana kweziyisihlanu zenani labantu abakhona emhlabeni. Lena akuyona induna, induna, furunculosis noma psoriasis. Inkinga ukuthi isifo cishe 781 million abantu - dandruff. Lokhu Uma unganakile, akuyona inkinga enkulu yezimonyo ungavula umuntu ibe Pariah, ikakhulukazi phakathi nokuvuthwa usakhula, ukwenza uzizwe ukungakhululeki njalo nokukhathazeka. Ukuze uzwisise inkinga, kubalulekile ukufunda izimbangela dandruff.
Umqondo wokuthi dandruff kwenzeka ngenxa yokusebenza ngokweqile nokucindezeleka akulungile, ngoba imbangela dandruff kuyinto ukhunta. Isikhunta okuthiwa Pityrosporum ovale - a "owakhileyo" njalo ekhanda. Kujwayele feeds imikhiqizo nezindlala sebaceous izinwele follicle. Ngo ukusebenza evamile ye nezindlala sebaceous ka ukhunta akubangi ukungakhululeki. Kodwa uma izindlala sebaceous iphazamisekile ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, ithinta ngqo inani ukhunta. sezinwele oily - a ndawo idume ngokudla ukhunta ukukhiqizwa kabusha. Phakathi nalezo zinsuku, abelana, futhi ukwanda inamba izikhathi eziningana kuqhathaniswa yasekuqaleni. kunamaqoqo amangqamuzana esikhumba uqale ngenkuthalo amabombo olungaqinile, dandruff obumba.
Ukutadisha izimbangela dandruff nesenzakalo abakwazi ukunikeza impendulo ecacile yini isizathu esiyinhloko lasungulwa. Ukwephula nezindlala sebaceous singenzeka ngenxa ukunakekelwa okungafanele izinwele, izinwele dryers hairdryer njalo noma pilings njalo utjuzhkom ngenxa iziyaluyalu hormone, amanzi kanzima, ukukhathala njll, Noma inhlanganisela yalezi zizathu. Ngakho-ke, ukwelapha njani dandruff kungacacisa ukuthi udokotela trichologist, kuncike izizathu oholele kulo. Lo chwepheshe uzokutshela kanjani ukubhekana dandruff, lena inkinga enzima kakhulu.
Nokho, ukuze uqale nilwe dandruff kungaba zabo. Uma yokuphila wakho uyashintsha, kodwa ke izimbangela dandruff kungenziwa kunqunywa ngokuzimela awokuthi.
Into esemqoka ekulweni kanye nokuvinjelwa dandruff - zisebenzisa inhlanzeko yabo. Futhi naphezu kweqiniso lokuthi ukhunta Pityrosporum ovale kuyisici esihlupha bonke abantu, ukusetshenziswa izimpahla angaphandle kungaba nomthelela nalomsebenzi efolomeni lalo, okuholela kwetinhlavu dandruff.
isiko Ukudla ubuye isimo kubalulekile ekwelapheni dandruff. Sweet, ufulawa, amafutha, ukudla okubabayo futhi okunosawoti kungaluqinisa kakhulu esivivaneni ukuze kuthuthuke nalomsebenzi nezindlala sebaceous we sezinwele. Kuyadingeka ukuba phuza okumsulwa izinga lamanzi, kusukela ekhanda ngokuvamile amanzi anele okuvela emzimbeni.
Dandruff has a iphunga ezingemnandi abukhali, ngakho ukusetshenziswa amashampu zokwelapha, futhi aqede iphunga ezingemnandi ezivimbela ukuthuthukiswa kwe-ukhunta.
Dandruff eba sezinwele oily, ngakho udinga ukugeza ngokucophelela izinwele zakho bese uhlikihla ukuze sikhuthaze kwegazi isikhumba. amashampu Special ukulawula oiliness kwesikhumba empilweni ukhunta osithathayo isinyathelo ngqo, yawanciphisa. Ezinye izimali nethonya uyaxebuka nokusiza ukususa isikali ungqimba Horny we sezinwele.
Futhi, ekhanda oily kuzosiza ukusetshenziswa njalo buso. Buso eyenziwe ngobumba olumhlophe ukususa fat ngokweqile. Kuze kube yimanje, ingxube yobumba okumele asetshenziswe ekhanda futhi izinwele, bopha ithawula bese ushiye for isigamu sehora. Ingalungiswa kusuka burdock izimpande tonic. Badinga ukusula sezinwele, okuyinto kuzonciphisa kakhulu nokuqukethwe kwalo amafutha.
Izimbangela dandruff zihlukile kubantu ezahlukene, futhi kungenziwa ihlanganiswe, ngakho udinga acophelele ekwelapheni dandruff kanye inqubo zokuvimbela yayo. Akubalulekile ukuba nethemba lokuthi ngesikhathi esifanele zonke kuzodlula.
Beautiful kwekhanda izinwele naphakathi ngezandla zakhe: imibono ezithakazelisayo, ongakhetha kanye nezincomo
Redfish: umonakalo noma inzuzo ukuze umzimba
Quilling amasu - pacifying ikhono lokwenza iphepha yobuciko
Amavithamini 'Magne B6' - yokusetshenziswa